Akụkọ - Gini bụ valvụ ụgbọ mmiri tankị
A na-akpọkwa tankị subsea valves, pneumatic subsea valves, valves mberede, na mberede mechie-apụ valves. Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe ọghọm ọsọ ọsọ na ọdụ ụgbọ mmiri nke ụgbọ ala ngwongwo dị egwu na China na 2014, ngalaba steeti dị mkpa emeela ka nlekọta nke ndị na-emepụta ụgbọ ala dịka tank tank mmanụ, na GB 18564.1 nke Mobile Suburement Vessel Subcommittee nke National Pressure nyere. Kọmitii Na-ahụ Maka esslọ Ọrụ ess2006 "hicgbọ ala ụgbọ mmiri maka Transportgbọ njem okporo ụzọ nke Ngwongwo Liquid Dị Ize Ndụ Nkebi nke 1: Nchọpụta Nka na ụzụ maka forgbọ Mmiri Metal Atmospheric" na-ekwupụta n'ụzọ doro anya na a ga-etinye valvụ na-emechi ihe mberede na ala nke tank maka ibugharị okporo ụzọ nke ngwongwo mmiri dị egwu.
Nhazi na mejupụtara:
Valvegbọ mmiri ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri abụghị naanị ọwa nke ụgbọ mmiri na-eji ebu ma budata mmanụ, kamakwa ihe bụ isi nke na-achịkwa ma na-agbanye okirikiri nke mmanụ. Ihe edeputara ya bu akwara, usoro ikpuchi ya, ihe njiri ya, njigide ugbo ososo na oria ivu. A na-etinye usoro akara ahụ n'ime mmiri mgbe ị na-etinye ya ma jikọọ ya na efere ala dị n'okpuru ebe a na-agbanye tankị; Usoro ahụ na-eji ike na-agbanwe nke mmiri igwe anaghị agba nchara iji mee akara akara akpaka nke mere na valvụ ala dị na steeti emechiri emechi; A na-arụ ọrụ mmeghe na mmechi site na usoro njikwa.
Mgbe a na-akpali ike mpụga na mpụga, enwere ike ịmalite na mmiri na valvụ dị n'ime, wee si otú ahụ belata pipeline mmanụ n'ime 10S, na-ahụ na nchekwa nke onye na-ajụ ya n'ụgbọala, na-egbochi nsị, mgbanye, na mgbawa; ichebe ndị ọkwọ ụgbọ ala, ngwongwo dị n'ụgbọ ala ahụ, yana metụtara ya na mpụga ụgbọ ala Ngwongwo na nchekwa ndu!